အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Kyawkyawnanda - ဝီကီပီးဒီးယား
မင်္ဂလာပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်! ဒီနေရာကို သင်နှစ်သက်ကျေနပ်ပြီး ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကံမကောင်းလှစွာပဲ သင်ဖန်တီးလိုက်သော စာမျက်နှာ Lil Chan၊ သည် ဝီကီပီးဒီးယား၏ လမ်းညွှန်ချက်များ အချို့နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက် ထိန်းသိမ်းထားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဝီကီပီးဒီးယန်း တစ်ယောက်အဖြစ် တည်းဖြတ်ရေးသားခြင်းကို သင်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာတွေမှာ ကျေးဇူးပြုပြီး (~~~~) ကို ရေးသားခြင်းဖြင့် သင့်အမည်ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါ။ သင့်မှာ မေးခွန်းများရှိနေပါက Wikipedia:Questions သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမှာ ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်တဖန် ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်! Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၄၆၊ ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
Lil Chan အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
Lil Chan စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် အဆိုပြုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း A7 အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆောင်းပါးသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ချင်း၊ အဖွဲ့အစည်း (တီးဝိုင်းအဖွဲ့၊ ကလပ်၊ ကုမ္ပဏီ စသည်)၊ ဝက်ဘ်အကြောင်းအရာ၊ သို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းအရာသည် ထင်ရှားကျော်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် အရေးပါခြင်းကို လက်ခံနိုင်လောက်အောင် ပြသနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ဤသို့သော ဆောင်းပါးများသည် အချိန်မရွေး ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်အချက်များအား ထင်ရှားအရေးပါမှုအဖြစ် လက်ခံသည်ဆိုခြင်းအား ဖတ်ရှုပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၄၆၊ ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
အခုလိုရှင်းပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာKyawkyawnanda (ဆွေးနွေး) ၁၆:၃၁၊ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
အကိုးအကားထည့်သွင်းတဲ့နေရာမှာ နာမည်ပါရုံ ဖော်ပြထားတဲ့ ကိုးကားချက်တွေ ထည့်သွင်းတာမျိုး မသင့်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ရေးသားထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့် အကိုးအကားမျိုး ဖြစ်ရမှာပါ။ ဥပမာ အမှတ် ၆ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၌ ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ၁၀တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)မှ Mechanical ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်အတွက် ထည့်ထားတဲ့ အကိုးအကားနှစ်ခု ၁ နဲ့ ၂ ဟာ ဖော်ပြထားချက်နဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် အကိုးအကားလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်များက ဖော်ပြချက်များကို အကိုးအကားအနေနဲ့ ထည့်သွင်းသင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ပေါ်က ဖော်ပြချက်တွေကို အကိုးအကားပြုတာမျိုးကိုလည်း ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ကိုးကားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၈:၄၂၊ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ့ သူတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်း တွေ ရခဲ့တဲ့ ဘွဲ့ တွေကို ဖော်ပြထားတဲ့ Midea တွေ မရှိတာကြောင့်ကျွန် တော်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါပြီ. ကျွန်တော့ ဆောင်းပါး လေးက အခု ​အချက်အလက်လေး တွေအရပြည့်စုံရဲ့လား စစ်ဆေးပေးပါဦးခင်ဗျMyanmar wikipedia မှာ ဒီဆောင်းပါးလေးဆက်လက်ရှိမှာလား သိချင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ့. ကျွန်တော်မသိတာတွေ ကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ကျေးဇူးအများကြီးတင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ့ Kyawkyawnanda (ဆွေးနွေး) ၀၈:၅၅၊ ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Kyawkyawnanda&oldid=470428" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၀၈:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။